Jadwal shaqo oo dabacsan ayaa u oggolaanaya shaqaalaha inay doortaan marka ay shaqeynayaan, ilaa inta ay saacadahooda gelinayaan toddobaad kasta.
Waxay wanaajisaa xariiqda hoose
Waxay wanaajisaa xiriirka lala yeesho dadka wada shaqeeya
Waxay kordhisaa niyadda, daacadnimada, ballanqaadka
Waxay kordhisaa ku qanacsanaanta shaqada guud
Waxay horumarisaa caafimaadka
Waxay kordhisaa farxadda iyo qanacsanaanta shaqada
daraasad xaaladeed: Goff Public
Goff Public waxay siisay dabacsanaan shaqaalaha sanado badan, iyadoo la aqoonsanayo dadku waxay leeyihiin qaabab shaqo oo kala duwan iyo ballanqaadyo shaqsiyeed si ay isugu dheelitiraan. Laakiin jadwalka shaqada isku-dhafka guud ee shirkadda waa cusub tan iyo markii uu faafay COVID-19.
CFO/COO Heidi Larson, xarumaha dabacsanaanta ee haysashada shaqaalaha iyo soo jiidashada kartida. "Waxaan nahay shirkad soo koreysa, waxaana dooneynaa inaan awoodno inaan soo jiidano kuwa ugu fiican uguna iftiinka badan," ayuu yiri Larson. "Waxaa dheer, waxaan joognaa suuq amar ku bixiya jadwal dabacsan."
Shaqaalaha Goff Public waxay ka soo noqdeen fogaansho buuxda Julaay 1, 2021. Tan iyo markaas, shirkaddu waxay hirgelisay nooc isku-dhafan, halkaas oo shaqaaluhu ay joogaan xafiiska Talaadada, Arbacada iyo Khamiista oo ay ka shaqeeyaan guriga, haddii ay doortaan, Isniinta iyo Jimcaha. Shaqaalaha qaarkood waxay doortaan inay si buuxda uga shaqeeyaan xafiiska.
"Jawaab weyn ayaa laga bixiyay jadwalka shaqadayada isku-dhafka ah, mana u hurayno la xisaabtanka dabacsanaanta," ayay tiri CFO/COO Heidi Larson. "Ugu dambayntii, waxaan rabnaa inaan shaqo weyn u qabano macaamiisheena. Maalin kasta, waxaan ku wada xiriirnaa gudaha halka aan joogno "Xaashka Kulul", kaas oo qeexaya mudnaanta ugu sareysa iyo halka aan ku gaari karno asxaabteena. Ganacsi diiradda saaraya macmiilka, waa muhiim in la ogaado sida loo wada gaadho midba midka kale."
Madeleine Rush, maareeyaha xisaabaadka sare ee Goff Public, wuxuu jecel yahay in uu yeesho moodal dabacsan oo isku dhafan hooyo leh caruur yaryar. Waxay ka faa'iidaysataa maalmaha shaqada-guriga sababtoo ah way sahlan tahay in la maareeyo meelaynta xannaanada oo laga boodo safarka. Isla mar ahaantaana, waxay jeceshahay in ay wejiga la yeelato asxaabteeda oo ay dareento inay yihiin kuwo wax soo saar leh oo wada shaqayn leh marka ay xafiiska joogaan.
Isbeddel kale oo ka dambeeya masiibada ayaa ah in shaqaaluhu aysan mar dambe dareemin cadaadis ay ku soo laabtaan xafiiska ka dib ballan shaqsiyeed. Waxay kaliya ka shaqayn karaan guriga.
Huang, Qinlei, Erin L. Kelly, Phyllis Moen, iyo Eric Tranby. "Beddelka Shaqada, Beddelka Caafimaadka: Dabacsanaanta-Waqtiga Shaqada Dhabta ah ma kor u qaadi kartaa dabeecadaha caafimaadka iyo fayoobida?" Wargeyska Caafimaadka iyo Dhaqanka Bulshada. December 6, 2011
North Carolina Early Childhood Foundation. "Shaqaalaha Waqooyiga Carolina Waxay Ku Heshiiyeen: Hab-dhaqannada saaxiibtinimo ee qoyska waxay u fiican yihiin ganacsiga." Sebtember 12, 2018
Miller, Stephen. "Waalidiintu waxay ku qiimeeyaan faa'iidooyinka wakhtiga dabacsan ee ka horreeya mushaharka." Bulshada Maamulka Kheyraadka Aadanaha. Ogosto 17, 2016
Xafiiska Fulinta ee Guddoomiyaha Golaha La-taliyayaasha Dhaqaalaha. Isu-dheellitirnaanta Nolosha-Shaqada iyo Dhaqaalaha Dabacsanaanta Goobta Shaqada. Maarso 2010
Bond, James T. iyo Ellen Galinsky. Dabacsanaanta Goobta Shaqada iyo Shaqaalaha Mushaharka Yar. Qoysaska iyo Machadka Shaqada ee Daraasadda Qaranka ee isbeddelka xoogga shaqada. 2011